Lionel Messi ayaa badalay Argentina
Lionel Messi ayaa laga yaabaa inuu ka tago FC Barcelona dhamaadka xilli ciyaareedkan. Taasi waa xaqiiqo jirta oo aan indhaha laga qarsan karin.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in Messi uu mar hore kula taliyay kooxda inay la soo wareegto bedel ay Barcelona dooneysay muddo dheer isla markaana ay heysato fursado fiican oo ay kula soo saxiixan karto xagaaga.
Talada Messi waa Inter Milan Lautaro Martinez, oo ah weeraryahan da ’yar oo durba lagu qiimeeyay 110-110 milyan, laakiin dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay Koorna Fayras ayaa hadda ku qasabtay Inter inay ku iibiso wax ka yar. Barcelona ayaa ugu dambeyn la soo saxiixan doonta badalka Messi
Blaugrana hadda waxay heysataa fursadda ugu fiican ee ay ku heli karto Lautaro Martinez. Weeraryahankan ayaa doonaya inuu u ciyaaro kooxda Barcelona laakiin heshiiska ayaa kuxiran inta lacag ee ay Inter Milan aqbasho.
Halka Inter ay ubaahantahay inay iibiso ciyaartoy si ay lacag uhesho, Lautaro waa fure muhiim ah lagumana iibin doono qiimo kayar.
Martinez oo 23 jir ah ayaa seddex gool u dhaliyay kooxdiisa kulankii ay la ciyaareen kooxda Crotone. Wuxuu si joogta ah uga mid yahay xulka Argentina waxaana la sheegaa inuu yahay ninka kala wareegaya maaliyada lambarka 10aad Lionel Messi marka uu ciyaaraha ka fariisto.
Ka dib markii uu dhaliyay 7 gool 13 kulan oo uu u ciyaaray Argentina, waa ciyaaryahanka ugu fiican Argentina ka dib Messi, sidaas darteed weerarka Argentina wuxuu ku jiraa gacmo wanaagsan Barcelona ayaa sidoo kale sameyn karta.
Xildhibaan Somali-Canadian ah oo raali gelin ka bixiyay
At least 21 civilians killed in militia attack in